Kemer, Turkey - mbukwane. Kemer - izinto, hambo
Zonke iholide okuhle ngasolwandle. Ikakhulukazi uma kolwandle - angaphandle. Kodwa lokho umuntu bethamele ilanga futhi ukubhukuda kuphela ngeke egcwele. Bakhathala amanga usuku lonke phezu kwesihlabathi, futhi kunzima ngokwenyama, ngendlela ukushisa okunjalo. Ngingathanda ukushintsha, futhi ezweni elisha kusenzima ezithakazelisayo ukubazi. Ngakho-ke, uhlela isikhathi sokuphumula, kuyatuseka ukuba ukhethe zonke okufanayo endaweni ogwini, ngakho ngeke ukwazi nje amanga ogwini, kodwa futhi like ezindaweni ezithakazelisayo, ujabule futhi ujoyine indaba. Zonke lezi zinzuzo athweswe ngokugcwele Kemer (Turkey). Izikhangibavakashi (izithombe zazo izokwethulwa esihlokweni) ukuthi resort Kuyathakazelisa ngakho, noma ukungcebeleka okunikezwayo lapha zahlukahlukene kakhulu, ukuthi ngeke be bored ngisho isihambi fastidious kunazo. Nokho, konke - ukuze.
Ngakho, Turkey. Kemer. Kokubona, hambo, ekuhlaziyeni izindawo zokungcebeleka kancane yomlando. Funda!
The yokungcebeleka ine indawo ekahle kakhulu - Olunye uhlangothi lwaso ubizwa wageza ngasolwandle, futhi ngakolunye edolobheni imbozwe ezintabeni. Uma kwaba umuzana wokudoba, kodwa namhlanje - yezindawo avakashelwa yizivakashi ogwini Turkish, okuyinto inembobo ayo, inala nightlife, izitolo, izindawo zokudla, amahhotela, amabhishi. Nokho, inkathi ukubhukuda Uthatha May kuya ku-October, futhi kwezinye izinyanga kungekho dolobha kancane ezithakazelisayo Kemer. Turkey kanye ezikhangayo okuyinto zahlukahlukene ngakho, wonke alungele ukukhonza izivakashi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, ngakho uma othile unesifiso ukuza lapha ebusika noma iwe ngenxa umsebenzi noma ngenxa yokushisa ukungabekezelelani - iya kuyo. Obunesithukuthezi nje ngeke. Ikakhulukazi ngoba amahhotela eziningi ube amachibi okubhukuda asendlini ngamanzi olwandle kanye solarium, ngakho ubuya eholidini nge esihle Mediterranean tan futhi ukuvela okuningi kusuka iholide e Kemer (Turkey), isikhathi kabani nokuzwa eside uma hhayi phakade bahlale imemori. Mayelana ezithakazelisa kakhulu, ethandwa kakhulu phakathi izivakashi, ukuchaza ngokuningiliziwe ngezansi. Kodwa kungakenzeki lokho, mangisho ukuthi uma othile umxhwele ohlwini, futhi ungenza eyakho ukuhlolwa. Futhi ukusiza kule mephu Kemer zendawo, okuyinto angathengwa yiliphi ihhotela.
Le ntaba kungokwalabo esiyingqayizivele kunazo, elise Kemer (Turkey) mbukwane. Abantu bendawo basibiza ngokuthi Chimera nomlilo-ukuphefumula, futhi bonke ngenxa izinkulungwane zakhe zeminyaka luwumlilo. Sekube imizamo eminingi wokukucima kanye ehluleka, ngoba ngemva kwesikhashana ilangabi kuyabuya. Ikakhulukazi hypochondriac ukubona lokhu olwalusikisela ezingaqondakali, ososayensi ukuchaza, konke kulula kakhulu - ke wokhela ngokuqhubekayo ukhululeka yembathani igesi entabeni.
Ukuthola lesi simangaliso bemvelo kungaba ngaphandle kwezinkinga, futhi itholakala edolobhaneni entabeni Cirali. Ukuze uthole lapha, elingene yokukhokhela uhambo ibhasi, okuyinto kubiza cishe $ 20.
Yilokho ikakhulukazi Kuyaphawuleka Kemer (Turkey), izinto ezithatha eningi izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, kungcono yokuthi kukhona Akumangalisi okwakuthandelene endulo kanye yesimanjemanje. Thola okungenani Demre efanayo. Kuyinto igama zamanje. Futhi eqinisweni kuba - Emanxiweni aleli dolobha, ngubani ngekhulu lesihlanu BC, wawaziwa ngokuthi i-World. Lapha Ngazalwa, baphila futhi washumayela uqobo Nikolay Chudotvorets. Ngo Demre, wembelwa. Ngokushesha ngemva kokufa kwakhe emhlabeni futhi laqala ukuphulukiswa ezimangalisayo, yingakho Nicholas uMenzi Wezimangaliso futhi waqala ukushaya. Nokho, ngekhulu leshumi, izinsalela zakhe bathunyelwa e-Italy, kodwa kusukela ngaleso sikhathi, futhi ezimangalisweni singayekanga, abantu bathi izindela kuboniswe ngqo abathwali phezu lokona okungathí sina. Kwazi bani, mhlawumbe izinsalela saint sika esikhukhula asekhona. Futhi-ke akunakwenzeka ukuba sibabaze le emangalisayo, etholakala eduze ngokushesha edolobheni Kemer (Turkey) mbukwane.
Ngaphezu kwalokho, i-World kubhekwa lapho kwazalelwa Santa Claus, ngoba, ngokusho legend, kwathiwa lapha wazalwa isiko ukwethula izipho ngoKhisimusi kanye umsunguli waso waba kuyahlonishwa izinsuku ubudala, Bishop UNikolai.
Namuhla e Demre minyaka edonsela amakhulu ezinkulungwane amakholwa, ama-pilgrim kanye nezivakashi, kanye nemikhosi eziningi ezahlukene labetibambile yemidlalo walondoloza lapha.
Lona omunye ezikhangayo enkulu Kemer, olubizwa nangokuthi Mount Olympos. ayizinkulungwane Cishe emibili nengxenye kwamamitha ukugibela imoto ikhebula - futhi manje zivakashi ngokushesha zithutha nepharadesi nakwezifudumele e obusisiwe cool seqhwa ebusika. Shono lapha uma uhlangabezana nazo zonke onkulunkulu Olympian, ngoba imvelo acwebile kule ndawo ngempela yayiyinhle ngokwaphezulu. Futhi ngaleso kwentaba amanga Emanxiweni aleli dolobha of the gama elifanayo lasendulo.
Ukuze ubone ubuhle ongavamile sentaba saphezulu, futhi itoho namuhla, futhi iNational Park, kwanele ukuthi isebenzise isevisi ye ikhebula emotweni. Izingane ezineminyaka engu-kuze iminyaka eyisikhombisa, iyothatha esikhundleni "imibuthano" wonkulunkulu Olympian khulula, abadala futhi ukuba ukhokhele zamadola amane ithikithi (travel zombili izinkomba). yenza ngokuphelelwa yithemba Ikakhulukazi futhi ingenza emqansweni ngezinyawo. Kungakaveli izintaba, bephuma kuyo yonke imizana eseduze ukuze inkonzo yakhe ibhasi engafinyelelwa kwayona, ngemoto, Nokho, kuyinto efiselekayo ukuthola Kemer kumephu futhi ngokucophelela ukuhlola komgwaqo.
Esinye isibonelo ezikhangayo avakashelwa emzini Kemer. Tours lapha hhayi kuphela ukunikeza ukuvela okuningi nomdlandla, kodwa futhi kunikeza ithuba ukujoyina bonobumba. Eqinisweni ku ezindongeni imidwebo emhumeni kungatholakala - futhi ngaphezulu noma ngaphansi - abantu basendulo, ngaphezu, kusenabantu ezihlukahlukene izinto, okuyinto ubudala ibhekisela enkathini we Paleolithic, Mesolithic futhi Neolithic. Kwazi bani ukuthi bangaki izimfihlo igcinwe vaults yayo kanye emathunjini? Nokho, ubuhle lonke emhumeni eziyinkimbinkimbi, okuyinto eqhele ngamakhilomitha ayishumi ukusuka Kemer futhi kuyinto engenakwenzeka imbala ukuchaza ngamazwi.
Belbidi ungavakashela uwedwa noma ukubhuka uhambo okubiza dollar ayishumi kuphela (umuntu ngamunye). Ukuze le mali, lo mhlahlandlela bayofaka kuwe izinto umlando endaweni ezungezile, futhi njengoba i-umnyango womhume, kuba mahhala.
Akunakwenzeka ukuba bavakashe Kemer hhayi ukuvakashela idolobha endala eTurkey. Ngokusho yetinsita wayengumuntu umxhasi Athena yena. Kukholakala ukuthi yasungulwa ngekhulu lesithupha BC, ke kwaba ifakwe emathekwini ezintathu, futhi bakhonza ukuhweba Umsebenzi oyinhloko. Yingaleso kusukela izandla zabantu ethile yaleli dolobha enomqhele wegolide Aleksandr Makedonsky.
Namuhla, yebo, kusukela kancane eyayisele komuzi, kusale kuphela amanxiwa izindonga inqaba, egumbini eliyingungu ethempelini, abanye izakhiwo zokuhlala. Kodwa kukhona ingxenye enkulu yamathuna, lapho, ngokusho legend, Aleksandr Makedonsky wangcwatshwa. Phaselis ivuliwe sokuhambela kusukela ayisishiyagalolunye ekuseni. Isici ezithakazelisayo - e indlela yokukhokha yokwamukelwa zamadola awamukelekile. Ngicabanga lokhu kuyinto intela enjalo ezikhathini zamandulo. Ngakho, ukuze uthole ukuthi le nsimu, izivakashi omdala okudingeka yakho ephaketheni 14 amakhilogremu.
Libuye libe uhlobo ekhangayo Kemer, obuye yawo ebanzi. Ukuqala emnyango, udabula edolobheni. Kulapha iningi amahhotela, boutiques, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo, zokudla nezindawo zokudla. On the Boulevard, ungabona ezithakazelisayo ebaziwe Imvula lothando, isikhumbuzo Kemal nezinye ezikhangayo. Kusihlwa ukungcebeleka eduze Boulevard kuzoletha kumnandi, ikakhulu uma wenza ukuvakasha ngoMsombuluko, lapho Boulevard elinganisa ukuyiqabula njengesenzo nemakethe ekulu lapha ungakwazi behlise kuze frenzy nabathengisi futhi enze ukuthengwa inzuzo kakhulu.
Akukhona nje ukuthi iphetheni izinsalela zomlando banganikeza Kemer. Kukhona inala zonke izinhlobo imisebenzi kanye ukuzijabulisa abathanda ongaphandle. Abaningi babo, ngasendleleni, kuyoba nesithakazelo hhayi kuphela abadala kodwa futhi izingane. Mayelana inkulumo edume kakhulu ku.
Ngakho kuyinto epaki enikeza eziningi ezimnandi ezihlukahlukene esivela a luyingxenye okuphumuzayo ngasolwandle. Lena omkhulu lolwandle ndawo, ifakwe konke ababekudinga ukuze bethamele ilanga nokubhukuda. Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu uzimisele ukunikela lokubamba iqhaza emisebenzini yazo zonke izinhlobo ongase uzicabange of ezemidlalo - kusukela banal futhi evamile Ukushushuluza amanzi scuba diving kanye paragliding isiphetho. Ezinkantolo (ithenisi kanye igalofu), amakilabhu eminingi, kuhlanganise nezingane, amachibi okubhukuda, amathilomu, imigoqo kanye zokudlela - konke lokhu kungatholakala ngaphakathi eziyinkimbinkimbi.
Trip ku amanzi ipaki
Aquaworld - epaki amanzi yesimanje, Ukuvakashela okuzokwenza kube ezithakazelisayo kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Inama konke kuyadingeka ukuze abalandeli of imidlalo eyingozi phezu kwamanzi, kanye charm ekhethekile evakashile namanje e yokuthi akukho okuningi abantu, kusukela akuwona wonke amaholide bayasazi ukhona.
Yiqiniso, evakashele Dolphinarium namuhla kunzima kusimangaze umuntu, kodwa Ukuvakashela Kemer yayo namanje ukuletha kumnandi. Futhi isici esisodwa ngaphezulu. Ngaphezu yokubuka isethulo nethuba ifotho ngisho dive namahlengethwa (imizuzu eyishumi iminyaka eyikhulu namashumi dollars), ungakwazi ubhalisele Yiqiniso yokwelapha ihlengethwa. Ochwepheshe - abantu namahlengethwa (yebo!) - ukusebenza nezingane abakhona indiza yimuphi ukuphambuka psycho-ngokomzwelo.
A ulwazi ezithakazelisayo kakhulu futhi kuyoba kwabaningi Sia embukisweni ethnographic. Lena Museum kakhulu, etholakala endaweni evulekile, ngokuvakashela lapho ungafunda okuningi mayelana nokuphila kwabantu Turkish ukuhlangabezana, kanye kuqala isandla sibheke impilo sezizwe zakwa ayimizulane, endleleni ngidlula ekilasini esiyingcweti ukupheka izitsha eziningi kazwelonke.
Turkey, Kemer ... yindawo enhle, lapho unga ngokuphelele futhi aziphumulele. Futhi umphefumulo nomzimba.
Moscow, Museum-Manor: incazelo, isithombe
Holiday eSweden - ezweni ebuntwaneni
Murcia (Spain) - indawo ebukekayo iMedithera
Lakshmi Narayana Ithempeli nezinye namathempeli amaHindu eNdiya
Inxanxathela Memorial Bald Intaba (Volgograd) - sikhumbula umlando wethu
London, uBig Ben: incazelo, umlando, amaqiniso athakazelisayo
Awazi kanjani abilayo izimbiza Aerogrill? Sizokusiza
Indlela enhle ukuqoqa izinwele ngokwakho?
Ukunciphisa imilenze ku-simulator: inqubo yokwenza
Ezicitshwayo Modern e-Ukraine. Precision izikhali Ukraine
Amavithamini for umbono ngemithi yanamuhla: amanani kungenzeka, ukubunjwa
Ubuhlungu ngaphansi kwesokunxele isiphanga. Kungakhathaliseki ukuthi kuyingozi?
Yini udinga ukuthatha ku umphathi, noma konke mkhakha
Dream Ukuhunyushwa. Kungani iphupho impi
Ukuthenga eLondon: izithombe, izincomo kanye nokubuyekeza
Yokupaka elingekho emthethweni otshanini: sihloko, isijeziso, isijeziso
Anna Tabakova: biography nezithombe